UBartlett kwiiNtetho kunye neenqwelomoya ze-Emirates Ukwazisa ngenqwelomoya eKhethekileyo eya eJamaica
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » UBartlett kwiiNtetho kunye neenqwelomoya ze-Emirates Ukwazisa ngenqwelomoya eKhethekileyo eya eJamaica
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE
UMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica, oHloniphekileyo. U-Edmund Bartlett (ekunene) ubulisa i-Emirates Airlines' Senior VP Commercial Operations - Americas, uSalem Obaidalla, emva kwentlanganiso enemveliso kwikomkhulu lenkampani eDubai. Ngexesha lentlanganiso, eyenzeka nge-24 ka-Okthobha, baxoxa ngamathuba okuzisa inkonzo ekhethekileyo phakathi kweDubai neJamaica, ekubhiyozeleni uSuku lweJamaica kwiDubai Expo 2020, ebonwa ngoFebruwari 2022.
UMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica, oHloniphekileyo. U-Edmund Bartlett, uye waveza ukuba uqalise iingxoxo kunye nabameli abaphezulu be-Emirates Airlines, ngenjongo yokwazisa indiza ekhethekileyo phakathi kwe-Dubai ne-Jamaica ekuqaleni konyaka ozayo. Isibhengezo siza njengoko uMphathiswa ebequkumbela imisebenzi yentengiso kwi-United Arab Emirates (UAE) izolo, ngentlanganiso ebalulekileyo nabaphathi abaphezulu be-Emirates Airlines kwikomkhulu labo laseDubai.
Eyona nto yayiphambili kule ngxoxo yayikukwazisa ngenkonzo eyodwa phakathi kweDubai neJamaica, kubhiyozelwa uSuku lweJamaica kwiExpo 2020, eDubai ngoFebruwari 2022.
Kukwakho nengxoxo enemveliso malunga nokhenketho kunye namathemba okubuyisela inqwelomoya.
Iingxoxo ezongezelelekileyo zilindeleke ukwenza unxibelelwano oluzeleyo ngakumbi lwe-Emirates kunye namanye amahlakani akuMbindi Mpuma.
Into ephambili yengxoxo ebanzi yayikukwazi ukwazisa inkonzo ekhethekileyo phakathi kweDubai kunye Jameyikha, ekubhiyozeleni uSuku lwaseJamaica kwi-Expo 2020, eDubai ngoFebruwari 2022. “Savumelana ukuba sihlolisise ukuba nokwenzeka kokulungelelaniswa kwale nqwelomoya, iinkcukacha zayo eziza kwenziwa ngokukhawuleza. Kukwakho nengxoxo enemveliso malunga nokhenketho kunye namathemba okubuyisela inqwelomoya kunye nepateni entle ye-V efunyanwa yiJamaica naseDubai, utshilo uBartlett.
Ulindele iingxoxo ezongezelelweyo kumxholo wezicwangciso zeendawo ezininzi eziqulunqwayo kumantla eCaribbean ukwenzela ukuba kubekho uthethathethwano olupheleleyo lwe-Emirates kunye namanye amaqabane kuMbindi Mpuma. I-Emirates yeyona moya inkulu kwi-UAE, kwaye kuMbindi Mpuma iyonke, isebenza ngaphezulu kwe-3,600 yeenqwelomoya ngeveki.
Ngelixa wayekwi-UAE, uMphathiswa uBartlett neqela lakhe baye badibana noGunyaziwe wezoKhenketho welizwe ukuze baxoxe ngentsebenziswano kutyalo-mali kwezokhenketho olusuka kummandla; amalinge okhenketho kuMbindi Mpuma; kunye nokufikelela kwesango kuMntla Afrika naseAsia kunye nokuququzelela ukuhamba ngeenqwelomoya. Kukwakho neentlanganiso nabaphathi be-EMAAR, esona sikhulu nesibalulekileyo sobubele kunye neReal Estate/umphuhlisi woLuntu kuMbindi Mpuma; I-DP World, enye yezona nkampani zinkulu kwihlabathi kunye nezothutho lwaselwandle; I-DNATA, umqhubi omnye omkhulu wokhenketho kwi-UAE kunye ne-TRACT, umkhenkethi onamandla eIndiya.
“Umjikelo wemisebenzi yentengiso kunye neqela lam kunye namaqabane aphambili kukhenketho kunye nempahla e-UAE, ibe neziqhamo kakhulu. Ngokungathandabuzekiyo oku kuya kubangela inkqubo yokuqinisekisa utyalo-mali olutsha, iimarike kunye namasango asuka kuMbindi Mpuma, eAsia/Asia Minor kunye naseAfrika ukuya eJamaica nakwezinye iiCaribbean,” ucacise watsho uMphathiswa uBartlett.
Ukusuka kwi-UAE, uMphathiswa uBartlett uya eRiyadh, eSaudi Arabia, apho uya kuthetha kwi-5th edition ye-Future Investment Initiative (FII). I-FII yalo nyaka iza kubandakanya iingxoxo ezinzulu malunga namathuba otyalo-mali olutsha lwehlabathi, uhlalutyo lwentsingiselo yoshishino, kunye nothungelwano olungenakuthelekiswa nanto phakathi kwee-CEO, iinkokeli zehlabathi, kunye neengcali.
Uya kudityaniswa nguSenator, oHloniphekileyo. U-Aubyn Hill kwisikhundla sakhe njengoMphathiswa ngaphandle kwePotfoliyo kwiSebe lokuKhula koQoqosho kunye nokuDalwa kweMisebenzi (MEGJC), enoxanduva lwaManzi, uMhlaba, ukuThunyelwa kweNkqubo yoShishino (BPOs), uGunyaziwe woMmandla woQoqosho oKhethekileyo waseJamaica kunye neeprojekthi ezizodwa.
UMphathiswa uBartlett uza kubuyela kwesi siqithi ngoMgqibelo, nge-6 kaNovemba 2021.